Dowladda Federaalka oo go’aansatay in shirarkii Hey’adaha ku qaban jireen Nairobi laga raro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 23 May 2019
Federaalka Soomaaliya ayaa go’aansatay in dhamaan shirarka, Kulamada iyo Siminaaradii ka dhici jiray Nairobi laga raro, kaddib markii dhowaan dowladda Kenya ay dal ku galka u diiday Wasiiro iyo Xildhibaano ka qeyb geli lahaa Shir uu soo qaban qaabiyay Midowga Yurub oo ka dhacayay Nairobi.
Ilo ku dhow dhow Kulanka Golaha Wasiirada ee maanta ayaa sheegaya in lagu wargeliyay Wasaaradaha Xukuumadda in wixii hadda ka dambeeya wixii shirar, kulamo iyo Siminaaro loo raro magaalooyinka Kampala, Kigali iyo Addis Ababa.
Sidoo kale waxaa la faray Wasaaradaha inay la socod siiyaan Hey’adaha ay bah wadaagta yihiin in shirarkii lagu qaban jiray loo raro magaalooyinkaas, si loogu fududeeyo Mas’uuliyiinta dowladda ee shirarka ka qeyb galaya.
Midowga Yurub ayaa ka carooday tallaabadii dowladda Kenya ay dal ku galkeeda ugu diiday Wasiiro iyo Xildhibaano ka qeyb geli lahaa shir maalmo ka hor ka dhacayay Nairobi, waxaana shirkaas ka baaqsaday xubnihii uu hoggaaminayay wasiirka Qorsheynta Jamaal Xasan Maxamed oo qudhiisa markii loo diiday Baasaboorka Diblomaasiga in Viso loogu dhufto la soo baxay Baasaboorka dalka labaad ee uu heysto oo ah Canada.
Magaalada Nairobi ayaa xarun u aheyd inta badan Hey’adaha Caalamiga ah, waxaana shirar iyo Siminaaro uga qaban jireen hey’adaha dowladda Soomaaliya, sidoo kale magaaladan ayaa labaatankii sano u dambeeyay aheyd saldhiga Siyaasiyiinta Soomaalida.
Tallaabooyinka dowladda Kenya ay cadaadiska diblomaasiyadeed ku saareyso dowladda Soomaaliya ayaa loo arkaa mid Kenya qudheeda saameyn ku yeelan kara, maadaama Hey’adaha Caalamiga ee ka howlgala Soomaaliya ay xarun ku leeyihiin Nairobi, haddii cadaadiskaas sii socdana ay ku qasban yihiin in magaalooyin kale u wareegaan,